NSD | Just another Ubuntu MM Site
Posted by :sawkhaing On : February 4, 2018
Category: Ubuntu Journey
Sysadmin တွေ နေ ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြသနာ တွေထဲက တစ်ခု ကတော့ log file တွေ ပါပဲ။ အဲမှာ မှ ကိုရွှေ program က daily split တွေ ခွဲ ပါတယ် တစ်ရက်ကို ပဲ 30 GB လောက် ရှိတဲ့ single file ဆို နားကားပါပြီး။ Incident တစ်ခု ဖြစ်လို့ ကြားထဲက log ကို ဖောက်ယူ ချင်တယ် တိုင်ပက်ပါပြီး less နဲ့ ဖတ်တယ်၊ awk နဲ့ ဆွဲထုတ်တယ်၊ grep နဲ့ စစ်တယ်။ 30GB ကို ဖတ်တဲ့ system resource usage ကို လဲ ထည့်တွက်ရပါသေးတယ်။ အချိန် လဲပိုပေးရပါတယ်။ ကွ ျန်တော်က တော့ 2GB , 15 file ခွဲလိုက်ပါတယ် less နဲ့ဝင်ကြည့်ရတာလဲ မြန်သွားသလို့၊ အချိန်ကုန် လဲသက်သာပါတယ်။
split -b 2GB example.log prefix
size ကို သတ်မှတ်ရာမှာလဲ (K,M,G,T,P,E,Z,Y) unit များကို သုံးထားရင်တော့ x 1024 ၊ KB,MB,… unit တွေ ဆိုရင် တော့ x 1000 နဲ့ ခွဲ သွားမှာပါ။ File size နဲ့ တင် မဟုတ်ပဲ line အရေ အတွက်နဲ့ လဲ ခွဲထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
split -l 1000 example.log prefix
split –help ခေါ်ပြီး အသုံး တည့်သလိုလဲ သုံးနိုင်ကြပါစေဗျာ။:)
split လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို လဲ cat နဲ့လွယ်ကူစွာ ပြန်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။
cat prefix* > example.log
Posted by :sawkhaing On : February 3, 2018
Zombie process ဆိုတာ က တော့ child process ရဲ့ အလုပ်ပြီး တဲ့ အချိန် မှာ parent process ကို exit status မပို့ပဲ ကျန်နေတဲ့ process တွေပါ။ သူကို သာမန် kill နဲ့ လဲ ပိတ်လိုက်လို့မရပါဘူး သူကိုယ်တိုင်က kill ဖြစ်နေပြီးသား မို့ပါ။ အချို့ program တွေမှာ တော့ သုံးပြီးသား PID ကို child မှာ ပြန် မသုံးစေချင်တာကြောင့် child process ကို zombie အနေ နဲ့ hold လုပ်ထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Program ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲ zombie တွေ များလာရင်တော့ ပြသနာက သုံးပြီးသား PID တွေ သုံးလို့မရတော့ ခြင်း နဲ့ system memory ကို ခွဲဝေ ပေးနေရပါတယ်။
Zombie process ကို top ဒါမှမဟုတ် ps aux ရဲ့ STAT မှာ ‘Z’ အနေ နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။Zombie ကို (” kill -s SIGCHLD ” ) ဆို ပြီး ပိတ်ဖြစ်နိုင်သလို့ သူရဲ့ parent process ကို kill ပြီး zombie ကို orphan process များကဲ့သို့ init က adopted ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ (:
Check and Start the Service Script
Posted by :sawkhaing On : June 6, 2017
Check the service count is greater than zero. if yes the service is running and if not start the service.
/bin/systemctl start $service
Let’s put it in the one minute crontab to work automatically.
* * * * * /bin/sh /PATH/TO/SCRIPT.sh
Stream Youtube on Terminal
Posted by :sawkhaing On : March 9, 2017
We can stream youtube via terminal, never boring in the DC. Enjoy!!! ?
Posted by :sawkhaing On : November 14, 2016
World Largest Chipset company ဖြစ်တဲ့ Intel က Linux *OS တွေ အတွက် Graphics ကို official ထုတ်ပေးထားပါတယ် 01.org ဆိုတဲ့ လိပ်စာနဲ ့ပါ။ Graphic driver ကိုက်ညီမှု ရှိသွားပြီး ဆိုတဲ့ အတိုင်း display power saving က သိသာလာမှာပါ။
Download the Intel Graphics Update Tool v2.0.2
Support ပေးတဲ့ CPUs တွေပါ …
Next Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – KabyLake
6th Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – Skylake
5th Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – Broadwell
4th Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – Haswell
3rd Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – Ivy Bridge>
2nd Generation Intel® Core™ processors with Intel® HD Graphics – Sandy Bridge
Intel® Celeron® Processors with Intel® HD Graphics – Broxton
Intel® Celeron® Processors with Intel® HD Graphics – Braswell
Intel® Celeron® Processors with Intel® HD Graphics – Bay Trail
လက်ရှိမှာတော့ 2016Q2 ဆိုတဲ့version ကို ထုတ်ထားပြီး 4th Generation ဖြစ်တဲ့Hsewell နဲ့ 5th Generation Broadwell ကို display ပါဝါ ခွေ ျတာ တဲ့ features တွေ Panel Self-Refresh (PSR) နဲ့Frame Buffer Compression (FBC) တွေကို လဲ default အနေ နဲ့ enable လုပ်ပေးလာပါတယ်။ Broxton နဲ့KabyLake ကိုတော့ နောက်လာမယ် version update တွေမှာ ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်လို ့လဲသိရပါတယ်။
Posted by :sawkhaing On : July 25, 2016
ဒီပို ့ကတော့ linux native နဲ့မဟုတ်ပဲ LVM partition နဲ့တင်ထားတဲ့ root partition ကိုတိုး မှာဖြစ်ပါတယ်။ LVM Partition ကိုသုံးရတဲ့ အချက်ထဲမှာ ကျွနေ်တာ် ကြိုက်တာကတော့ live server ကို downtime အနည်းငယ်နဲ့ လွယ်ကူစွာ volume increase လုပ်လို့ ရတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ESXi ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ server ကို တိုးကြည့်ရအောင် …..
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ server က LVM ဟုတ် မဟုတ် စစ်ကြည့်ရအောင်
ဒီမှာဆိုရင် /dev/sda5 ရဲ ့ID 8e နဲ့ type နေရာမှာ Linux LVM လို ့တွေ ့ရမှာပါ။ 8e ဆိုတာကတော့ LVM ကို ကိုယ်စားပြု တဲ့hax code ဖြစ်ပြီးတော့ 83 ကတော့ linux native partition ကို ပြောတာပါ။ /dev/sda ကခု ဆိုရင် total 20 GB ကို လဲ အပေါ်ဆုံးမှာ တွေ ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by :sawkhaing On : November 5, 2013
Viber ကို portable နဲ ့.DEB နှစ်မျိုး ပေးထားပါတယ် 64bits ကို ပဲ support ပေးတယ်လို ့ပြောထားပါတယ်။
Portable အတွက် Ctrl+Alt+T ဆိုပြီး terminal ကို ဖွင့်ပြီး
လို့wget ကို သုံး ပြီး သူ ဆိုဒ်ကနေ ့ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ unzip လုပ်ပြီး
ဆို သုံးလို ့ရပါပြီး။
.DEB အတွက်ကတော့ Terminal မှာ
Install လုပ်ဖို ့အတွက်ကတော့
ဆို လို ့Terminal မှာပဲ ရိုက်လိုက်ရင် ရပါပြီး။
home/xyz/Viber/Viber: 1: /home/xyz/Viber/Viber: �: not found
/home/xyz/Viber/Viber: 1: /home/xyz/Viber/Viber: ELF: not found
/home/xyz/Viber/Viber: 1: /home/xyz/Viber/Viber: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
32bits သုံး သူများ ကတော့ အထက်ပါ error တက်ပါ က အောက်ပါ လင့် အတိုင်းပြုပြင်ကြည့်ပါ
Nokia N8 ကို Ubuntu ပေါ်မှာ Internet share မယ်..
Posted by :sawkhaing On : January 3, 2013
N8 ကို wvdial နဲ့　ချိတ်ပြီး　mobile internet ကို　ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ　share သုံးနည်းပါ။
၁.Ctrl+Alt+t လို့terminal ကို ခေါ်ပြီး wvdial ကိုသွင်းပါ
၂. ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာကနေဖြုတ်ပြီး
ပြီးရင် ဖုန်းကို ” Nokia Ovi Suite ” mood ပြောင်းပြီး ပြန်တက်လိုက်ပါ အထက်က ကုဒ်ကိုပဲ
ပြန်ရိုက်လိုက်ရင် /dev/ttyACM0, /dev/ttyUSB0, လို့တိုးလာ ပါတယ်
၃.wvdial ရဲ့ config file ကိုမြန်မာပြည် mpt ရဲ့ setup ပြင်ပေးရန်လိုပါသေးတယ်
လို့ gedit ဆော့ဝဲလ်　နဲ့ wvdial ရဲ့　configuration ကိုဖွင့်လိုက်တာပါ
gedit ပွင့်လာပြီးရင်　အထဲမှ　စာများကို　အကုန်ဖျက်ပြီး　အောက်ပါ　ကုဒ်များကို　ကူးထည့်လိုက်ပါ
; called with "sudo wvdial --config /etc/wvdial.conf N8"
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","mptnet",,0,0
၄.config name ကို　လဲ
sudo wvdial --config /etc/wvdial.conf N8
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ဖုန်းကိုကော်　Ubuntu ကိုပါ　restart ချလိုက်ပါ။
နောက်တခါ　တွေ့ပြန်ချိတ်ရင်တော့　နံပါတ် ၄　ကcommand　တစ်ကြောင်းပဲရိုက်ရင်ရပါပြီး..:)